50% Discount Service – iSure Myanmar
Home › Promotions › 50% Discount Service
50% Discount Service
Posted by Boris Zaw on January 16, 2019
ဟောင်းလေကောင်းလေဆိုပြီး model ဟောင်း iPhone တွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲသုံးနေသေးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေလည်း တချို့ရှိကြအုံးမယ်ထင်ပါတယ်။ တချို့ဆို iPhone စထုတ်ကတည်းက ကိုင်လာတာ၊ တချို့ iPhone 4, တချို့ , တချို့ iPhone 4s, တချို့ iPhone5စသဖြင့် model ဟောင်း iPhone လေးများကို ယခုအချိန်အထိ ရိုရိုသေသေနဲ့ တမြတ်တနိုး ကိုင်တွယ် သုံးစွဲနေဆဲ ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ရှိအုံးမှာပါ။
တချို့လည်း အဲ့လို မူလလက်ဟောင်း iPhone လေးတွေ တစ်စုံတစ်ရာ ချို့ယွင်းချက်ရှိနေလို့ မကိုင်တွယ်ကြတော့ပဲ စွန့်ပစ်လိုက်ကြသူတွေလည်း ရှိနိုင်ကြသလို တချို့လည်း ချို့ယွင်းမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိနေပေမယ့် သုံးလို့ အဆင်ပြေနေသေးရင် မှေးပြီးသုံးနေကြသလို ... တချို့လည်း သိမ်းဆည်းထားတာမျိုးတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
Apple က သူ့ရဲ့ ထုတ်ကုန်အဟောင်းတွေများကို အသစ်ထပ်မံ မထုတ်တော့သည့် device တွေအများအပြားရှိနေပါတယ်။ တချို့ device များဆို အပိုပစ္စည်းများလည်း ထပ်မံထုတ်မပေးတော့သလို Service ပိုင်းလည်း တာဝန်ယူခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်တော့ပါဘူး။ ၎င်း device များကို Vintage လို့ Apple က အမည်ပေးထားပါတယ်။
အဟောင်းတွေဟာ ကောင်းနေဆဲဆိုပေမယ့် တစုံတရာချို့ယွင်းချက် အနည်းအများရှိနေကြပြီး မစွန့်ပစ်ရက်တဲ့ မိတ်ဆွေများလည်း ရှိကြမှာ။ ချို့ယွင်းချက်ကလည်း ရှိနေ၊ သုံးလို့ကလည်း အဆင်မပြေ၊ Apple ကလည်း ပြင်မပေးတော့၊ ဘယ်မှာမှ ပြင်လို့လည်း အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေကြီးများအတွက် သတင်းကောင်းလေး ရှိပါတယ်။ အဲ့တာကတော့ iSure (Apple Service Center) မှာ Vintage ဖြစ်သွားသည့် Model အဟောင်း iPhone များဖြစ်သည့် iPhone4, iPhone 4S , iPhone 5, များအပြင် iPhone 5s များ Service ဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက် အထူးအစီအစဉ်လေး တစ်ခု စီစဉ်ထားရှိပါတယ်။
၎င်းအစီအစဉ်လေးကတော့ iPhone 4, 4s,5နှင့် 5s များ LCD နှင့် Battery လဲလှယ်မှုပြုလုပ်ပါက ကျန်သည့် Service ဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက် 50% Discount ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
iPhone 4, 4s,5နှင့် 5s များ Service ဆောင်ရွက်ခြင်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်အသီးသီးတို့ကို သိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ link ကိုနှိပ်၍ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေများရဲ့ အသိအကျွမ်းများထဲမှာ ဟောင်းနေပေမယ့် မပစ်ရက်ပဲ သိမ်းဆဲထားတဲ့ Vintage iPhone ချစ်သူတွေများရှိနေရင် လက်တို့လိုက်ကြပါအုံးဗျာ။
� iSure Yangon
No. 111, Botahtaung Pagoda Road (Lower Block), Yangon.
YGN Hotline: 09 782000049, 09 264441607 - 08
Open Daily - 10AM to 7PM
� iSure Mandalay
G(3/4), 78th Street, Between 30th & 31st Street, Mandalay.
MDY Hotline: 09 762000049, 09 264441607 - 08
Open Daily - 9AM to 8PM
February ဖွား iPhone ပိုင်ရှင်များအတွက် အထူး Promotion
50,000 Kyats discount on iPhone X LED replacement